Pamukkale ချီတက်ပွဲ Kata မီးခိုး Powder ခဲ့ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeတူရကီတူရကီ Aegean ကမ်းခြေ20 DenizliPamukkale ချီတက်ပွဲ Kata မီးခိုး Powder ခဲ့သည်
Pamukkale ချီတက်ပွဲ Kata မီးခိုး Powder ခဲ့သည်
31 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 20 Denizli, တူရကီ Aegean ကမ်းခြေ, PHOTOS, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, တူရကီ 0
pamukkale ဆန္ဒပြပွဲအမှုန့်မီးခိုး katti
Denizli ဝန်, အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, Pamukkale ၏မြူနီစီပယ်နှင့် Denizli Pamukkale ပြိုင်ပွဲစိတ်လှုပ်ရှားစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်းနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. စနစ်တကျစတင်ခဲ့သည်။ ဇူလိုင်လ 15 Delikliçınအာဇာနည်နေ့စတင် Akvadi နှစ်ထပ်ကိန်းအတွက်အထူးဇာတ်စင်ရဲ့ start နှင့်အတူစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ကြခြင်းနှင့် Pamukkale မှာဆက်ပြောသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Osman လျက်ဇိုလာကသမ္မတ Avni သစ်ခွနှင့်လညျးမိမိလေယာဉ်မှူးရဲ့ဆန္ဒပြပွဲအရောင်ပုံရိပ်တွေ၏မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ကူညီပေးခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီကြီးများအဖွဲ့အစည်းကိုမနက်ဖြန် (01.09.19) ကြက်ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီးဟရေပေါလိနှင့်အတူအဆင့်ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးလိမ့်မည်။
အဆိုပါ ER ASSISTANT လေယာဉ်မှူးများ၏လျက်ဇိုလာ၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့်ခေါင်း
အားကစားအဖွဲ့အစည်းများကလုပ် Denizli, Denizli မြူနီစီပယ်, Pamukkale မြူနီစီပယ်နှင့်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး Denizli ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏ပံ့ပိုးမှု, တူရကီမော်တော်ယာဉ်အားကစားအဖွဲ့ချုပ်များနှင့် Aegean မော်တော်ယာဉ်အားကစားကလပ်၏ခွင့်ပြုချက်၏ဝန်, Pamukkale ပြိုင်ပွဲစတင်ခဲ့သည်။ ဇူလိုင်လ 15 ၏အရေးပါယာဉ်မောင်းများ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူတိုင်းပြည်အနှံ့ Pamukkale ပြိုင်ပွဲရဲ့အခမ်းအနားစတင်Delikliçınအာဇာနည်နေ့ Square ကိုပေးထားခဲ့ပါတယ်။ Program ကိုအေကေပါတီ Denizli ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့် Nilgun Sahin T က Oke, မြို့တော်ဝန် Osman လျက်ဇိုလာ, Pamukkale မြို့တော်ဝန် Avni Örki, ဧည့်သည်များနှင့်အများကြီးနိုင်ငံသားများတက်ရောက်ခဲ့သည်။ Pamukkale မြို့တော်ဝန် Avni Örkiဒီနေရာမှာစကားပြောသူအဲဒီလို Pamukkale အဖြစ်တန်ဖိုးကမ္ဘာကြီးကိုမိတ်ဆက်ပေးနိုင်ရန်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်များစည်းရုံးရေးနေကြတယ် "အားကစားမဆိုကြင်နာဖို့ထောက်ခံမှုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ Pamukkale ပြိုင်ပွဲအရေးကြီးဆုံးသောသူတို့၏တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဤတွင်တိုင်းပြည်ဟာအလွန်အရေးကြီးသောရှေ့ပြေးလာပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ခရီးသွားဧည့်များ၏တိုးပွားလာ Pamukkale, Denizli မှလာမယ့်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်များနှင့်အတူကြောင်းသေချာစေရန်ဖြစ်ပါသည်။2ရက်ပေါင်း Denizli Pamukkale ပြိုင်ပွဲနှင့်အတူ adrenaline-ဖြည့်အချိန်လေးစင်ပေါ်ကိုပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီဖြစ်ရပ် Denizli ဝန်နှင့် Denizli မြူနီစီပယ်ကိုထောကျပံ့အပေါင်းတို့နှင့်တကွကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်ဆိုင်သူများမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေးကမ်းခြင်း၌, "ဟု၎င်းကပြောသည်။
Denizli မြို့တော်ဝန် Osman လျက်ဇိုလာအဖွဲ့နှင့်အတူ Pamukkale Pamukkale မြို့တော်ဝန် Avni Örkiပြိုင်ပွဲအားထုတ်ပေးအပေါင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သူများမှကျေးဇူးတင်ပါတယ် "နေစဉ်။ Denizli ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားခရီးသွားလုပ်ငန်းအခြားနည်းလမ်းပွားရှိရာမြို့တမြို့ဖြစ်ပါတယ်။ တက်Karahayıt မှစ. , ကေဘယ်လ်ကား Denizli, Pamukkale, အနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းထံမှ Denizli ၏ဤမြို့သို့ခရီးသွားဧည့်အဖြစ်လာသောသူတို့အားအခြားနည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိသည်။ Pamukkale ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်လုပ်တဲ့စက်ခေါင်းဖြစ်ပါတယ်။ တူရကီအတွက်အမည်နှင့်အရာခပ်သိမ်း Pamukkale နှစ်ဦးစလုံးကျနော်တို့ထောက်ခံမှုပေးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းကမ္ဘာကိုကြေညာဖို့ကျင်းပပါလိမ့်မည်။ ငါ Pamukkale မြို့တော်ဝန် Avni သစ်ခွဤချီတက်ပွဲလုပ်ဆောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါချီတက်ပွဲစကော့အခမဲ့ပြီးစီးရန်ဆန္ဒရှိ, "ဟု၎င်းကပြောသည်။ သူ၏မိန့်ခွန်း၏ Pamukkale ပြိုင်ပွဲစတင်ထို 40 မော်တော်ယာဉ်အားဖြင့်ပေးထားခဲ့ protocol ကိုအဖွဲ့ဝင်များနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
Akvamir SENLIN ခဲ့
Akvadar အတွက်အထူးဘေးကနေဇာတ်စင်နှင့်အတူဆက်လက်အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်ပြင်းထန်သောအကျိုးစီးပွားဆွဲဆောင်သောဆန္ဒပြပွဲကားများရဲ့ start ပြီးနောက်။ Pamukkale Pamukkale မြူနီစီပယ် Akvadi ပြိုင်ပွဲအထူးဇာတ်စင်မှဆက်စပ်နှင့်မြူနီစီပယ်ခြင်းဖြင့်လှုပ်ရှားမှုများကိုအမျိုးမျိုးကျင်းပခဲ့တယ်။ ညာဘက်ဘေးရှိပြိုင်ပွဲဖို့သားသမီးရဲ့ကစားကွင်းဧရိယာခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးကလေးများပျော်စရာအချိန်ဖြုန်းဖို့အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ မျက်နှာပန်းချီ, စစ်လွန်ဆွဲလျက်, သားသမီးများ၏ Havicat လူရွှင်တော်-မျက်နှာများရှိုးပွဲအမျိုးမျိုးနှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင် bream နှင့်အတူရယ်။ တူညီသောဧရိယာ Denizli မြူနီစီပယ် Conservatory တူရကီရိုးရာဂီတအဆိုတော် ISIL နည်းပြများတွင်နိုင်ငံသားများဂီတ၏ပွဲခံကိုဆွဲငင်။ အဆိုပါဆန္ဒပြပွဲများ၏ Pamukkale ပြိုင်ပွဲကားတစ်စီးပန်းခြံ၏လိဂ်မှာလည်းအကြီးအအကျိုးစီးပွားမြင်ကြပြီပူးပေါင်းခဲ့သည်။
Pamukkale Pamukkale မှာပရိသတ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာအဆိုပါပြိုင်ပွဲကိုအထူးအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူဆက်လက်။ သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုပြနေချိန်တွင်အထူးပြင်ဆင်ထားဒေသများရှိကားတစ်စီးယာဉ်မောင်းမှအဝင်ဝမှာ Pamukkale တောင်ဂိတ်အမှုန့်မီးခိုးနီးပါးကြမ်းပြင်ရှိကြ၏။ ဒီအဆင့်မှာ Denizli protocol ကိုအကြီးအစိတ်ဝင်စားမှုပြသသည်။ မြို့တော်မြို့တော်ဝန် Osman လျက်ဇိုလာ, Pamukkale မြို့တော်ဝန် Avni Örkiနှင့် Denizli ကုန်သည်ကြီးများကသမ္မတUğurတူရကီ, Pamukkale အထူး ETAB ချီတက်ပွဲကားများပေါ်တွင် Co-ရှေ့ပြေးစီးဖြစ်လာသည်, adrenaline အပြည့်အဝအချိန်လေးနေထိုင်ခဲ့တယ်။ ခရီးသွားဧည့်တစ်ဦးကြီးများအရေအတွက်ဆန္ဒပြပွဲမှလာမယ့်နှင့်အဖြူရောင်ပရဒိသုများကစိတ်ဝင်စားမှုနှင့်အတူစောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်လို့ကဲ့သို့ဇာတ်စင်ကြုံနေရသည်ဟုအရောင်ပုံများ, ။
ဆန္ဒပြပွဲ fever ဆက်လက်
အဆင့်နင်္ဂနွေနေ့ကို run ပါလိမ့်မည်အတူ Pamukkale ပြိုင်ပွဲ, ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ 10.13 40 နံနက်ယံ၌ဟရေပေါလိအတွက်ကားတစ်စီးနှင့်ယာဉ်မောင်းအဆင့်ကိုအကောင်းဆုံးအချိန်အောင်မြင်ရန်ရုန်းကန်ပါလိမ့်မယ်။ အခမ်းအနား Facility မှာသူတို့ရဲ့ဆုလက်ခံရရှိဦးမည် Pamukkale မြူနီစီပယ်Kocaçukဆက်လက်မညျဖွစျကွောငျးစိတ်လှုပ်ရှားမှုများ၏အဆင့်မှာကျင်းပလိမ့်မည်သည့်လေယာဉ်မှူးနှင့်အတူကြက်ဇာတ်စင်နှင့် Pamukkale ဇာတ်စင်။ အရပျကိုယူကြောင့် Pamukkale ပြိုင်ပွဲသည်ပူဖောင်းနှင့်လေထီးစီးခြင်းအဖြစ်အပျက်ကနေလည်းတွေ့မြင်နိုင်ပါသည် Pamukkale နေရာလုယူသော၏ပထမဦးဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။
အဆိုပါPalandökenနှင်းလျှောစီးလဲမှို့ထိုအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးမီးခိုးအတွက်သစ်တောများ 24 / 01 / 2014 အဆိုပါPalandökenနှင်းလျှောစီးနှင်းအတွက်သစ်တောများနှင့်အာမခံငွေမီးခိုး: Naif လယ်သမားများ '' နှင်း 'နဲ့' မီးခိုး '' အားဖြင့်Palandökenနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်း, သစ်တောကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအရာရှိအမည်ရှိနှစ်ခုခွေးနှင့်အတူကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်တောဧရိယာ။ သစ်တောဧရိယာများတွင် Erzurum Palandökenနှင်းလျှောစီးစင်တာသိုးစုကိုမဆိုဆိုးရွားသောအဖြစ်အပျက်ကိုကြုံနေရရှောင်ရှားရန်အစီအမံခေါ်ဆောင်သွားသည်ဟုပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်။ သစ်တောကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအရာရှိ Naif လယ်သမားများ, သစ်တောဧရိယာများ '' နှင်း 'နှင့်နှစ်ခုကင်းလှည့်စည်းချက်နှင့်အတူအမည်ရှိ' 'မီးခိုး' 'ခွေး။ ဒူး-နက်ရှိုင်းသောဆီးနှင်းများနှင့်ခွေးအတွက်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံလယ်သမားများ, သူတို့ကထင်းဧရိယာလှည့်လည်တနေ့လုံးထိန်းချုပ်ထားသည်။ နုံလယ်သမား, "ကျနော်တို့Palandökenအတွက်ထိန်းချုပ်မှုတောဒေသများအောက်မှာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ် ...
Izmir အတွက်အဆုံးရထားနှင့်ဘတ်စ်ကားအိပ်ဇောမီးခိုးလျှပ်စစ် 17 / 12 / 2017 စွမ်းအင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲရင်းမြစ်များအသုံးပြုပထမဦးဆုံး4စီမံကိန်းများတွင် Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, လေထု "253 တထောင်သစ်ပင်များသည်စင်ကြယ်ပေမယ့်ဖြစ်ဖို့" 94 တထောင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့တန်ချိန်ထံမှကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။ ဒါ့အပြင်ဘတ်စ်ကား 165 1000 မှတဆင့်ရထားလမ်းကွန်ယက်၏ 62 ကီလိုမီတာရောက်ရှိကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု၏တထောင်တန်ချိန်အသွားအလာကိုလည်းတားဆီးခဲ့သည်ကာကွယ်တားဆီးဖို့မြင့်တက်ခန့်မှန်းဖြာပါလိမ့်မယ်။ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်တူရကီအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဥပမာသပိတ်မှောက်ကျန်းမာနှင့်ရာသီဥတု-ဖော်ရွေမြို့တော်ကိုဖန်တီးရန်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်များအသုံးပြုခြင်းမှအကြီးအရေးပါမှုကိုပေးသည်။ အနာဂတ်သားစဉ်မြေးဆက်အဘို့သန့်ရှင်းပြီးပို livable မြို့စွန့်ခွာရန် "ဥရောပသမဂ္ဂမြို့တော်ဝန်သဘောတူညီချက်" မဘက်တက်သည်နှင့် 2020 နှစ်ပေါင်းဖို့တာဝန် ...
10 ပို့ဆောင်ရေးထင်းရူးသစ်ကို Volvo FH စီးရီးနှင့်အတူရပ်တန့်ပါဘူးစင်းကိုယူနစ်မှဖြည့်စွက် 19 / 04 / 2014 ထင်းရူးအရေအတွက်ကကြမ်းပြင် 10 ပို့ဆောင်ရေးသင်္ဘောသစ်တစ်ခုစီးရီး FH နှင့်အတူ Volvo အရှုံးမပေးပါဘူး: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအအေးခန်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထင်းရူးပို့ဆောင်ရေး, စင်းကို 10 စုစုပေါင်း FHA 460 မြင်းကောင်ရေ 4X2 2002 ဆွဲဆောင်မှုနှင့်အတူခိုင်ခံ့စေကတည်းကဒီဝယ်ယူမှုနှင့်အတူ Volvo နှင့်တစ်ခုလုံးကို Volvo ကုန်ကားနဲ့အလုပ်လုပ်များ၏အစဉ်အလာကိုချိုးဖျက်မပြုခဲ့စေသည်, ဒါဟာစင်းကို 30 အတွက်မော်တော်ယာဉ်များအရေအတွက်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ အရည်အသွေး, တိကျမှန်ကန်မြန်ဆန်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ 1995 စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနှင့်ဥရောပနိုင်ငံများကဖျော်ဖြေနှင့်အာရှထင်းရူးပို့ဆောင်ရေးပို့ဆောင်ရေးအအေးခန်း, စင်းကိုအားကောင်းလာစေရန်နှင့် Volvo နှင့်အတူနုပျိုနေဆဲဖြစ်သည်။ ထင်းရူးစတင်ဖွဲ့စည်းပို့ဆောင်ရေးကတည်းက Volvo နှင့်အတူအလုပ်လုပ်, ဝယ်ယူမှုများမတ်လထွက်သယ်ဆောင် ...
မီးရထား Pamukkale ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ် Talib ခဲ့ 13 / 03 / 2013 Talib ခဲ့ပေါ်တွင်မီးရထား Pamukkale ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း Pamukkale ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုမှ General Manager Mustafa Özdalgıç, ဝန်ဆောင်မှု၏တစ်ဝက်တစ်ရာစုပိုလျှံအတွက် Pamukkale ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်ဘတ်စ်ကားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရထားလမ်းကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်ကိုသုံးနိုင်သည်ဟုသူကဆိုသည်။ Pamukkale ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းအထွေထွေမန်နေဂျာ Mustafa Özdalgıç, သူတို့အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများ၏ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးအတွက်အတွေ့အကြုံ၏ထက်ဝက်ရာစုနှစ်တစ်ခုပြသရန်လိုကြောင်းပြောသည် "ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်အလွန်စစ်ဆင်ရေးအတွက်ခိုင်မာတဲ့နှင့်အခြေခံအဆောက်အဦများဖြစ်ပါသည်, ကျနော်တို့ယုံကြည်ထားပါတယ်" ဟုသူကပြောသည်။ ပို့ဆောင်ရေးရထားလမ်းဝန်ကြီးဌာနအတွက်နိုင်ငံတော်လက်ဝါးကြီးအုပ်၏အလုပ်ရုတ်သိမ်းရေး, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ခဏတစ်များအတွက်အစီအစဉ်ထိခိုက်အဓိကပြဿနာတစ်ခုမှာ။ ပါလီမန်ထဲမှာပြည်နယ်လက်ဝါးကြီးအုပ်၏ဖျက်သိမ်းဘို့ခရီးသည်နှင့်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးဥပဒေကြမ်းနေချိန်မှာန်ကြီးဌာန, သူတို့အခြို့သောလမ်းကြောင်းမှပုံစံမျိုးရယူတဲ့ကြေညာချက်ကိုစိတ်ကြိုက်မည်သို့ကွဲပြားခြားနားသောကဏ္ဍများကနေအမျိုးမျိုးသောကုမ္ပဏီများသည် ...
Pamukkale ရထားလမ်းစစ်ဆင်ရေး၌ရှိသမျှသောလိုင်းများကိုစိတ်ဝင်စားဖြစ်ပါသည် 15 / 03 / 2013 နောက်ထပ်ကုမ္ပဏီရထားလမ်းစစ်ဆင်ရေးအတွက်အပေါငျးတို့သရထားလမ်းလိုင်းများနှင့်ဆက်ဆံရာတွင် Pamukkale Pamukkale ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ပြင်ဆင်ထားသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Pamukkale ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းအထွေထွေမန်နေဂျာ Mustafa Özdalgıçအတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုအခွအေန၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုရှုပ်ထွေးပြောနေကြပါတယ်လေကြောင်းလိုင်း, ရထားလမ်းများနှင့်ပင်လယ်ခရီးသည်သူကထို့ကြောင့်otobüsçü၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများသို့မလွှဲမရှောင်ပြောင်းကုန်ပြီဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ Pamukkale ပေမယ့်လုပ်ငန်းစု၏ဖြစ်နိုင်ခြေအကဲဖြတ်ဖို့တစ်ယောက်တည်းကဏ္ဍထည့်သွင်းရန်လိုသည်။ သူတို့တစ်ဦးတည်းအာဏာကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုင်းများသာ high-speed ကိုမီးရထားလိုင်းနှင့်အတူÖzdalgıçပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်ရှိသည်အလေးပေးသူထိုလူအပေါင်းတို့သည်ဖြစ်နိုင်သောလိုင်းများစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်။ ရင်းမြစ်: ငါ့အ www.dunya.co
Denizli Pamukkale ပြိုင်ပွဲ
10 ပို့ဆောင်ရေးထင်းရူးသစ်ကို Volvo FH စီးရီးနှင့်အတူရပ်တန့်ပါဘူးစင်းကိုယူနစ်မှဖြည့်စွက်
မီးရထား Pamukkale ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ် Talib ခဲ့
Metro skein ကြမ်းပြင် skein
အဆိုပါ Metrobus ကားမောင်းသူလမ်းတို့တွင်အရှုပ်ထွေးကြောင်
Pamukkale သူတို့ရဲ့လေ့လာရေးခရီးချိုး6နှစ်ကြာစတင်ဖော်ပြ
Begin မှ Pamukkale Express ကိုကင်ပိန်း